Ady Totohondry Malagasy Tsy mitsahatra mitotongana
Tsy nahazo ny tapakila handehanana hiatrika ny Lalao Olympika 2020 hatao any Tokyo Japon ny taranja ady totohondry Malagasy.
Lavo teo amin’ny dingan’ny fifanintsanana avokoa mantsy ireo solontena Malagasy mianadahy niatrika ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika sady “Qualification JOI 2020” notontosaina tany Dakar Sénégal nanomboka tamin’ny 20 febroary 2020 lasa teo dia i Marco Jérôme (-52 kg) sy i Fahendrena (-57 kg). Izay rehetra nanontaniana mikasika an’ity tsy fahombiazan’ny boxeur Malagasy ity indray dia nilaza tsy am-pihambahambana avokoa fa ny fanomanan-tena mantamanta sy ny fanapahan-kevitra tampomtampoka noraisin’ireo tompon’andraikitra mitantana ity taranja ity ankehitriny no fositra tamin’ny tsy fahombiazan’izy mianadahy ireo. Lasa alavidavitra mihitsy azan y hevitr’ireo mpitantana fahiny sy mpiangaly an’ity taranja ity nilaza fa efa ela izy ireo no nitaky ny hanaoavana fifidianana hanoloana ny filoha am-perinasa ankehitriny izay mbola mitantana indray ny Task Force mitantana an’ity taranja ity fa efa ela dia ela no tapitra ny fe-potoana hiasana. Mila fandaminana vaovao ny fitantanana an’ity ady totohondry Malagasy ity izay tany amin’ny taona 2008 no nanana solontena tany amin’ny lalao olimpika farany tamin’ny alalan-dRazanadrakoto.
Mihetsika ary ankehitriny ry zareo ao amin’ny Association des entraîneurs de boxe anglaise Malagasy tarihan’ny filohany dia i Me Constantin avy any Toamasina ka hikarakara lalao ady totohondry goavana any Mananjary amin’ny 6-7-8 ary 9 martsa 2020 ho avy izao ka hanana solontena amin’izany fihaonana izany ireo ligin’ny ady totohondry miisa 13 misy eto amintsika afa-tsy ny ligin’Itasy sy ny ligin’i Menabe.